Xai Yak Techonology: May 2012
Posted by Xai Yak at 14:102comments:
နံနက်ခင်းလေး အိပ်ရာနိုးရင် နင့်အပြုံးလေးနဲ့အတူ
နင်ပြင်ပေးတဲ့ နံနက်စာလေးကို တစ်သက်တာ
နင်ထုတ်ပေးတဲ့ အကျီများကို ဘ၀တစ်သက်စာ
နင်နှုတ်ဆက်တဲ့ လိုက်ပို့အပြုံးနဲ့ ရုံးကိုအမြဲ
ချိုမြိန်လွန်းတဲ့ စောင့်ကြိုအနမ်းနဲ့ ရုံးဆင်းချိန်
နင်ပြင်ထားတဲ့ ညစာများနဲ့ အမြဲတမ်းသာ
နင်လိုအပ်တဲ့ အရာတိုင်းကို ကြိုးစားကာ
Posted by Xai Yak at 13:37 No comments:
Posted by Xai Yak at 15:15 No comments:
ဟုတ်ကဲ့ အခုကျနော်ဆွေးနွေးချင်တာကတော့ MIXPOD player လေးကိုဘလော့မှာထည့်သွင်းနည်းပါ
ပထမဆုံးအနေနဲ့ http://www.mixpod.com ကိုဝင်ပါ
နောက် ပုံပါအတိုင်း Register လုပ်ပါ ဒါတော့လူတိုင်းရမှာပါ
ပြီးရင် Login ၀င်ပါ
ပြီးရင် Create Play List ကို Click ပါ
ပြီးလျှင် Add Music မှ နေပြီး Add Url သို့ Popular Soung ၏ Search မှနေပြီး သီချင်းထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်
ပြီးလျှင် Customize မှ နေပြီး Skin Colour , Setting ( Autoplay or menual play)
ပြီးလျှင် Save Playlist မှ စိတ်ကြိုက်ထပ်ကလိပါ
ပြီးလျှင် Get Code မှ ကုဒ်ယူပါ
သင့် Blog တွင် MIX POD player လေး ရပြီပေါ့
Posted by Xai Yak at 15:04 No comments:
Korea မလေးတွေ ဘာ့ကြောင့် စကတ်တို ဘောင်းဘီတိုဝတ်သလဲ ?
ကျနော်အခုဝေဖန်ချင်တာက မြန်မာအမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လှပသောယဉ်ကျေးမှု
ကိုယ်လုံးကိုပေါက်ကို ဘာမှန်းညာမှန်းမသိအရုပ်ဆိုးအောင် (တချို့ပေါ့နော် အားလုံးမဟုတ်) လုပ်ဆောင်နေကြလို့ပါပဲ
ကိုရီးယားမလေးတွေ ဘာ့ကြောင့် စကတ်တို ဘောင်းဘီတိုဝတ်သလဲ ?
ကိုရီးယားဟာတောင်အာရှ ထဲမှာပါတယ်၊ရာသီဥတုကအေးလွန်းတယ် ဒါ့ကြောင့် အသားအရည်တွေဟာ ဖွေးပြီးနု
တယ် အသားအရည်ကတော့ ပင်ကိုက ချောမွတ်မနေပဲကြမ်းတယ်လို့သိရပါတယ်
ဒါ့ကြောင့် အသားလှအောင် ပေါင်းသင်ကြတယ် အလှနဲ့ပတ်သတ်တာအားလုံးလိုလုပ်ဆောင်တယ်
ကိုရီးယားတွေရဲ့အားနည်းချက်က ရာသီဥတုက ပင်ကိုယ်အေးပေမဲ့ ကျနော်တို့လို လှုပ်ရှားနေခဲတယ်
ဒါ့ကြောင့် မိန်းကလေးအများစုဟာ ရုပ်ကလေးတွေအသားအရည်တွေလှပပေမဲ့ လိပ်ခါး ဖားဖင် တွေဖြစ်နေတယ်
ပိုပြောမယ်ဆို ကျောနဲ့ ရင်နဲ့ တသားတည်း တင်နဲ့ ကျောနဲ့ တသားတည်းပေါ့ဗျာအဲလိုတွေကြောင့် သူတို့ဟာပေါ်လွင်အောင်
လို့ ဖြူဖွေးရှင်းသန့်တဲ့ပေါင်တန်တွေ ခြေသလုံးတွေပေါ်ပြီး ထင်ရှားအောင် စကတ်တိုလေးတွေ ဘောင်းဘီတိုလေးတွေကို
(အအေးပတ်ခံပြီး ဟီ) ၀တ်ကြတာလို့လေ့လာဖူးပါတယ်
တကယ်တော့ ကိုရီးယားတွေဟာလည်းအတို အပြတ်ကိုစခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး
အနောက်တိုင်းက စတာပါ Fashion Design သမားတွေဟာ ကိုယ်တာဝန်ယူရတဲ့ မော်ဒယ်တွေရဲ့ အချိုးအစားအလိုက်
အတိုအပြတ်တွေကို Design ဆွဲခဲ့ကြတာပါ အဲကစခဲ့တယ်ဆိုပါတော့
မြန်မာအမျိုးသမီးများကျတော့ သူများဝတ်တာကိုလိုက်အတုခိုးတယ်လို့ ဆိုနေကျပါတယ် (ဆိုနေကျတာနော် အနော်ပြောတာဟုတ်ဝူး)
တချို့တွေပေ့ါလေ မြန်မာ အမျိုးသမီးတွေမှာ ကိုယ်ပိုင် ယဉ်ကျေးမှု ကိုယ်ပိုင်အလှ နဲ့ရှိနေတာကို
ဘာ့ကြောင့်များ လိပ်ခါး ဖားဖင် အ၀တ်တွေနဲ့ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုကို မေ့လျှော့နေကြတာလဲ လို့ မေးလိုက်ချင်ပါတယ်
ဒီနှစ်သင်္ကြန်တုန်းက အဆိုးဆုံပါပဲ ကျနော် ဘုန်းကြီး ၀တ်ပြီး လူထွက်တော့ ကွန်ပျူတာလေးပြန်ကိုင်မိတယ်
အားပါးပါး ယူထားတဲ့ကုသိုလ်လေးတွေ (ရှားရှားပါးပါး)တောင် ဘယ်ရောက်မှန်းမသိအောင် စိတ်ပျက်မိတယ်
ဒို့မြေ ဒို့ရေ ဒို့ယဉ်ကျေးမှုတွေ
Posted by Xai Yak at 12:42 1 comment:
2.Windows log မှာ Application, Security, နှင့် System မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီမှာသူတို့ သုံးခဲ့တဲ့ နေ့ရက် အချိန်နာရီတွေနဲ့ ဘာတွေကို ဘယ်လိုသုံးခဲ့လည်းဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်
Posted by Xai Yak at 12:41 No comments:
Posted by Xai Yak at 14:10 No comments:
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လို ပြောပြော........... သံယောဇဉ် တစ်ခုကြောင့် ........ ငါ အရူးဖြစ်လဲ ကျေနပ်ခဲ့တယ်..........။ မလိုတော့ ထားခဲ့......... နင်လိုတိုင်း ရင်ဖွင့်ကြိုပေးခဲ့တယ်........။ ရင်နာရလွန်းလို့....... နာလို့ နာမှန်းတောင် ငါမသိတော့ဘူးးးးးးးး.......။ အော်......အဖြူရောင်ဆိုလဲ စွတ်စွတ် ဖြူပါရစေ....... အနီရောင် ဆိုလဲ ရဲရဲတောက် နေပါရစေ........... မာယာများတဲ့ ပန်းရောင် တော့ မဖြစ်ပါရစေနဲ့..........။ အမည်းရောင်ဆိုလဲ နက်မှောင်နေပါရစေ......... ဝိုးတိုးဝါးတားနဲ့ မီးခိုးရောင် မဖြစ်ပါရစေနဲ့...........။ တစ်ခါတစ်လေပေါ့.......... နင့်ကို ငါ့မျက်နှာကိုကြည့်လို့........ ငါ့မျက်ဝန်းကို နားလည်စေချင်တယ်..........။ နင့်ကို ရပ်ကြည့်ပြီးးးးးးးနောက်ချန်နေခဲ့တာ........ သွားစေချင်လို့မှ မဟုတ်တာ......... ငါ နာကျင်တာ မြင်မှာ စိုးလို့........... ငါ့ အရှုံးတွေ.......သိမှာစိုးလို့........။ နင် လှမ်းကြည့်လိုက်စမ်းးးးးပါ.......... နင် ရှိမယ့် နေရာမှာ ငါရှိနေမယ်......... နင် မှားမဲ့အချိန်တိုင်းးးငါ အမှားထောက်ပေးမယ်....... နင် သွားမဲ့ခြေလှမ်းတိုင်းးးးးး ငါ့မေတ္တာနဲ့ ခလုတ်မငြိ ဆူးမထိစေရဘူးးးးး ခြေလှမ်းတိုင်းးးးးခြေလှမ်းတိုင်းးးးးးးးးကိုပေါ့..........။ နင် စိတ်ချမ်းသာဖို့ ပဲ ကြည့်ပေးတဲ့ငါ့ကို....... ရူးလိုက်တာလို့ နင် ပြောနေမလားး??? သနားစရာ လို့များ မြင်နေမလား??? တကယ်တော့လေ........ ငါက ငါချစ်တဲ့ ငါမြတ်နိုးတဲ့ နင့်ကို.... သာတာ နာတာ မတွက်ဘဲ ဖြည့်ဆည်းပေးချင်တာပါ........ မလိုတော့ဘူးးးးးးးဆိုလဲ ..... နင် တစ်ချက် ကြည့်စရာမလိုအောင်....... ငါအလိုက်သိပါတယ်.........။ အချစ် ဆိုတာ ကိုယ်ကပဲ ချစ်ချစ်.......ကိုယ့်ကိုပဲ ချစ်ချစ်.... မေတ္တာမှန်နဲ့ ချစ်နေဖို့ပဲ လိုတာပါ............။ တစ်ခုတော့ ရှိတာပေါ့............. ပေးတိုင်းတော့ ဘယ်ပြန်ရပါ့မလဲ............ ကိုယ်ပေးနိုင်သလောက်.......... သူလက်ခံနိုင်သလောက်ပေါ့...............။ ။
Posted by Xai Yak at 13:54 No comments:
သာမန်မိတ်ဆွေက ဘယ်တော့မှ သင်ငိုမှာကို မကြည့်ရက်ဘူး... တကယ့်မိတ်ဆွေက သင် စိတ်ကြိုက်ငိုဖို့အတွက် သူ့ရဲ့ ပုခုံးကို သင့်ကို ပေးထားတယ်.... သာမန်မိတ်ဆွေက နေသာလေလာတဲ့အခိုက်မှာ သင့်ကို လာကြည့်တယ်... တကယ့်မိတ်တွေက သင် လဲကျ ဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ ကြုံတဲ့ အခိုက်မှာ သင့်ကို လာကြည့်တယ်... သာမိန်မိတ်ဆွေက ညသန်းခေါင် အချိန်မတော် ဖုန်းဆက်တဲ့ သင့်ကို မုန်းတီးတယ်... တကယ့်မိတ်ဆွေက...ဒီအချိန်ကြီး ဘာကိစ္စရှိလို့ ဆက်တာလဲဆိုတာ သင့်ကို မေးတယ်... သာမန်မိတ်ဆွေက သင့်ရဲ့အခက်အခဲတွေ အရှုပ်အရှင်းတွေကို ပြောဖို့ သင့်ဆီ ရောက်လာတယ်... တကယ့်မိတ်ဆွေက သင့်ရဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ သင့်ဆီ ရောက်လာတယ်... သာမန်မိတ်ဆွေက သင့်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကို စပ်စုတယ်... တကယ့်မိတ်ဆွေက သင့်ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို သူ့ကို ပြောပြဖို့ တောင်းဆိုတယ်... သာမန်မိတ်ဆွေက သင်သူ့ဆီ သွားလည်တဲ့ အခါ ဧည့်သည်လိုပဲ ဆက်ဆံတယ်... တကယ့်မိတ်ဆွေက... ရေခဲသေတ္တာထဲက စားစရာတွေ ကိုယ်တိုင်ယူလာပြီး ကျွေးတယ်... သာမန်မိတ်ဆွေက သူနဲ့ ရန်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါ...ဘော်ဒါ အကန့် နိဂုံးချုပ်သွားတယ်... တကယ့်မိတ်ဆွေက ရန်မဖြစ်ဘူးရင် မိတ်ဆွေစစ်မဟုတ်ဘူးလို့ လက်ခံတယ်... သာမန်မိတ်ဆွေက သင် အကူအညီလိုတဲ့အခါ ဟိုမေးဒီမေး လုပ်တယ်... တကယ့်မိတ်ဆွေက အရင်ကူညီပြီးမှ သင့်ကို မေးတယ်... သာမန်မိတ်ဆွေက သူ့ရဲ့ ဘေးနားမှာ သင် အမြဲရှိနေဖို့ လိုလားတယ်... တကယ့်မိတ်ဆွေက သင့်ရဲ့ ဘေးနားမှာ သူ အမြဲ အဖော်ပြုပေးဖို့ မျှော်လင့်တယ်... သာမန်မိတ်ဆွေက ကိစ္စရှိရင် ငါ့ကို လာခေါ်လို့ပြောတယ်... ဒါပေမဲ့ တကယ်အရေးကြုံရင် ဘေးနားမှာ မရှိတော့ဘူး.... တကယ့်မိတ်ဆွေက ကိစ္စရှိမရှိ ဆက်သွယ်ဖို့ သင့်ကိုပြောတယ်...တကယ်ကိစ္စကြုံတဲ့အချိန်မှာတော့ အရင်ဆုံး သင့်အနားကို ရောက်လာပြီး ကူညီဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေတတ်တယ်... Ref : Zayar
Posted by Xai Yak at 17:41 No comments:
၁ မိနစ်ကြာပြီးနောက်... သူ သင့်ဆီက မက်ဆေ့ခ်ျကို ဖွင့်ကြည့်နေတယ်လို့ သင်က ထင်တယ်.... ၂ မိနစ်ကြာပြီးနောက်....သူ သင့်ကို မက်ဆေ့ခ်ျ ပြန်မယ်လို့ သင်က ထင်တယ်.... ၃ မိနစ်ကြာပြီးနောက်...သင့်ရဲ့ ဖုန်းကို ဖွင့်ပြီး သူ့ဆီက မက်ဆေ့ခ်ျကို စတင် စစ်ဆေးတယ်... ၄မိနစ်ကြာပြီးနောက်...သူ ဘာလို့ မက်ဆေ့ခ်ျပြန်တာ ဒီလောက်နှေးလဲ သင် စတင် စဉ်းစားတယ်.... ၅ မိနစ်ကြာပြီးနောက်.... သူ သင့် မက်ဆေ့ခ်ျကို မမြင်လို့ ဖြစ်မယ်ဆိုပြီး သင့်ကိုယ်သင် နှစ်သိမ့်တယ်... ၆မိနစ်ကြာပြီးနောက်...ဖုန်းကိုကိုင်ပြီး...မက်ဆေ့ခ်ျပြန်လာမှာကို ခဏစောင့်တယ်.... ၇ မိနစ်ကြာပြီးနောက်....ဖုန်းကို ထုတ်ကြည့်ပြီး ကြာလိုက်တာလို့ သင်ထင်တယ်.... ၈ မိနစ်ကြာပြီးနောက်... သင်စ်ိတ်ပူပန်စ ပြုလာတယ်...သူ မက်ဆေ့ခ်ျ မပြန်တော့ဘူးလို့ ထင်သွားတယ်... ၉ မိနစ်ကြာပြီးနောက်...သူ့ဆီကို မက်ဆေ့ခ်ျ ထပ်ပို့ရင်ကောင်းမလား သင် စဉ်းစားတယ်.... ၁၀မိနစ်ကြာပြီးနောက်... မက်ဆေ့ခ်ျ ရိုက်လိုက်တယ်...နောက်ဆုံး ပို့ခါနီး ပြန်ဖျက်လိုက်တယ်... မိနစ် ၂၀ ကြာပြီးနောက်...သင်စိတ်မကောင်း ဖြစ်စ ပြုလာတယ်.... မိနစ် ၃၀ကြာပြီးနောက်... သူ့ရဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျ ပြန်လာမှာကို မျှော်နေမိပြန်တယ်... မိနစ် ၄၀ ကြာပြီးနောက်...နောက်ဆုံးမှာ သူ့ကို နောက်ထပ် မက်ဆေ့ခ်ျ တစ်စောင် ထပ်ပို့လိုက်တယ်.... မိနစ် ၅၀ ကြာပြီးနောက်....နဂိုတုန်းက ကြည်လင်နေတဲ့ စိတ်ကလေး... အရောင်ဆိုး ဖျက်ဆီး ခံလိုက်ရတယ်... အခု ၁ နာရီရှိသွားပြီ....သူ့ဆီက မက်ဆေ့ခ်ျကို မျှော်သာမျှော် ပေမဲ့မပေါ်လာသေးဘူး... နာရီအနည်းငယ်ကြာတော့... သင့်ရဲ့ အကြင်နာ စိတ်ကလေးက သင့်ကို မျှော်လင့်ချက် ပေးလာပါတယ်... နောက်တခါ ဟန်းဖုန်းကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်... သူ့ဆီက စာပြန်လာပါတယ်.... သင့်ကို ဘာဖြစ်လို့လဲ လို့မေးပါတယ်... စိတ်ထဲမှာ စောစောကလောက် မတင်းမာတော့ဘူး... ဒေါသ နဲနဲ ပြေသွားတယ်... ဒါပေမဲ့ သူ့ကို ဘယ်လို စာပြန်ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတယ်... ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့ဆီ စာပို့တုန်းကလို ပျော်ရွှင်တဲ့ ခံစားချက်မျိုး သင် ပြန်မရတော့ဘူးလေ.... သူ သင့်ကို စာပြန်လာပြီလေ...ဒါပေမဲ့ သင့်ကိုယ်သင် သနားပြီး စာမပြန်တော့ဘူး....အကြာကြီးစောင့်နေခဲ့တာ သူ့ဆီက မက်ဆေ့ခ်ျပဲ မဟုတ်လား.... သူ့ကိုလဲ စောင့်စားခြင်းရဲ့ ခံစားမှုကို နားလည်စေချင်တယ်လေ..ဒါပေမဲ့ သင် မခံစားနိုင်ဘူး...သူ့ကို မက်ဆေ့ခ်ျ မပြန်ပဲ မနေနိုင်ပြန်ဘူး.... ဒါပေမဲ့သင် သူ့ဆီကို စာပြန်လိုက်တဲ့နောက်...ပြန်ရလိုက်တာကတော့ အကြာကြီး ထပ်မံ စောင့်စားရခြင်းပါပဲ.... တကယ်တော့ နောက်တစ်ခါ ပြန်ပြီး စောင့်စားနေရတဲ့ သူနဲ့ သင် မထိုက်တန်ပါဘူး.... သူ အရမ်းအလုပ်များတယ်ဆိုတာ သင်သိရင်...သူ့ကို အနှောင့်အယှက် မပေးသင့်ဘူး.... သူ အလုပ်မများဘူးဆိုတာ သင်သိရင်... သင့်ကို စာပြန်တဲ့ နှုန်းက အတိုင်းထက် အလွန် မနှေးသင့်ဘူးလေ... သင့်ကို သူ လုံးဝ ဂရုမစိုက်တာ သင်သိသင့်တယ်.... သူ အဲလောက် စာပြန်တာ နှေးနေတာ ဘာလို့ အသည်းအသန် သူ့ကို စာပို့နေမှာလဲ.... မိမိကို တကယ် ဂရုစိုက်တဲ့သူဆိုတာ ဘယ်လောက် အလုပ်များများ...နည်းလမ်းရှာပြီး စာပြန်တယ်.... မိမိကို အလေးထားတဲ့ သူဆိုတာ သူ့ကို လိုက်၇ှာပြီး သတိပေးစရာမလိုဘူး.... သူ့ဘာသာ အလိုအလျောက် သင့်ကို သတိရနေတတ်တာမဟုတ်လား..... Ref: (ဇေယျာ)
Posted by Xai Yak at 17:35 No comments: